CFA vs. frm - Yikuphi Certification kuyinto Better? [It's a Close Call!]
CFA vs frm: Yikuphi Certification kuyinto Better?
23 Aug CFA vs frm: Yikuphi Certification kuyinto Better?
Posted at 22:50h e Alternate Articles ngu Bryce Welker, CPA 0 Amazwana
Updated:Okthoba 15, 2018
Ingabe CFA noma frm ongcono Umsebenzi Wakho?
CFA vs frm: Certification Izidingo
CFA vs frm: Umsebenzi Indlela
CFA vs frm: Certification Izindleko
CFA vs frm: Imiholo
Ngakho, Yikuphi ongcono Wena?
Lona omunye wemibuzo njalo kunazo wabuza ukuthi abafundi kumele benze lapho sinquma ukuze bazithuthukise emisebenzini yabo ngezimali. Okukhethayo kubalulekile ngoba ngamunye izitifiketi kuthatha kwadingeka basebenze kanzima, imali kanye nesikhathi. Kukhethwa kungaba nzima uma ungeyena bati umehluko ayo ayinhloko. Umehluko oyinhloko phakathi CFA futhi frm izitifiketi is izihloko embozwe. CFA ihlanganisa uhla olude ngezihloko e ezezimali like ezezimali yenkampani, ukuphathwa iphothifoliyo, ezimali, imali esinqunyiwe, nemikhiqizo. Ngokolunye uhlangothi, Frm kuyinto ezikhethekile kwezinhlekelele. Futhi, CFA kukulungiselela kahle imisebenzi yasebhange utshalomali, ukuphathwa iphothifoliyo, ucwaningo zezimali. I frm is zokuhamba kulabo abafuna ukwenza i-career kwi kwezinhlekelele amabhange, UMnyango kaMgcinimafa noma ukuhlolela ubungozi.
CFA imele Chartered lwezezimali Analyst futhi isitifiketi wathola ngokusebenzisa CFA Institute. CFAs ongoti in ukuphathwa utshalomali. Abanye umsebenzi iziqu ethandwa aphethwe CFAs zihlanganisa umphathi iphothifoliyo, umhlaziyi ucwaningo, kanye nokutshalwa kwezimali umnikazi. Futhi bathambekele abasebenza ngezimali yenkampani.
Frm imele Umphathi Ubungozi lwezezimali futhi isitifiketi ezihlinzekwa Global Association of Ubungozi Professionals. GARP kanye nezitifiketi frm kuthiwa wonke amazwe omhlaba. FRMs ubungozi senhlangano nokuthuthukisa amasu ukunciphisa noma offset ke. Betholakala khona ukusebenza e yasebhange, corporations, ukuphathwa kwempahla amafemu, futhi uhulumeni.
Ukuze ube CFA, kumelwe ubhalisele uhlelo isitifiketi anikezwa CFA Institute. Ukuze Bantu babhalisele lolu hlelo, udinga degree oneminyaka emine noma inhlanganisela imfundo / lomsebenzi aphase emithathu ingxenye ukuhlolwa esehlanganise izihloko ezilandelayo:
Kuthatha cishe 300 amahora isikhathi cwaningo kudlule ngalinye ezingeni CFA ukuhlolwa. Futhi, ukuthola usomqulu, udinga ukuba iminyaka okuhamba ngezine ahlobene lomsebenzi ngaphansi CFA. Kumelwe futhi ube ilungu CFA Institute.
Uma ufuna ukuba abe frm, kumelwe kudlule ezimbili ukuhlolwa kuphethwe Global Association of Ubungozi Professionals (GARP) esehlanganise izihloko ezilandelayo:
It uqobo Kuthatha frm ukhetho okungenani 150 amahora ukufundela ezingeni ukuhlolwa ngamunye futhi GARP ikhuthaza FRMs ukuthatha 40 amahora imfundo nokuqhubeka njalo eminyakeni emibili. Ngenkathi GARP akudingi nganoma yisiphi ethize iminyaka emine imfuneko noma esincane credit amahora, ukubamba umsebenzi kwezinhlekelele kuyadingeka ukuze abe impohlo. Ukuze uthole noma isitifiketi, uzilungiselele ukutshala isikhathi eside belungiselela cwaningo futhi ukuhlolwa.
Kuyinto ejwayelekile ukuthi CFAs babe namathuba amaningana umsebenzi kuka FRMs ngenxa izifundo zabo ezibanzi amakhono, ikakhulukazi izikhundla zokuphatha. CFAs ngokukhethekile ukulawula futhi okwenza ukutshalwa aleyo nkampani, okuyinto angakwazi ukusakaza nenetha ebanzi umsebenzi ohlakaniphe. CFAs ngokuvamile ukusebenza uthango izimali, amabhange utshalomali, futhi ezezimali corporate ukwenza yasebhange utshalomali, ukuphathwa iphothifoliyo, nocwaningo nokulingana. Ngokolunye uhlangothi, FRMs kukhona focus kakhulu ezikhethekile okwengeziwe ngokuhlaziya ingozi futhi wokuqonda izindlela ukuyinciphisa ngaphakathi inkampani noma iphothifoliyo. FRMs ngokuvamile banezikhundla esigabeni sabaphathi neyokuphatha ngubani ukugxila ingozi futhi ingozi utshalomali.
I CFA ukuhlolwa has a yesikhathi esisodwa Uhlelo sokungena Imali $450. Inani ukuhlolwa izimali ezingeni ngalinye ngokuvamile izindleko $930. CFA ukhetho zingalindela ukukhokha $1,100 ukuze $1,700 ukuthola charter zabo. Ukuthatha ukuhlolwa frm, udinga ukhokhe $400 Imali sokungena ngaphezu izindleko ukuhlolwa ngamunye. izindleko Ingxenye mina $875 futhi Ingxenye II izindleko $475. Ungalindela ukukhokha $1,050 ukuze $1,500 ukuba abe frm. Pass amazinga kokubili izivivinyo basesimweni 40 amaphesenti ububanzi.
Imiholo nganoma yisiphi umsebenzi kuncike isihloko somsebenzi, oseneminyaka engu-, nendawo. CFAs kungaba uthole iholo phakathi $45,000 futhi $180,000 ngonyaka kuye ngokuthi siyini isikhundla sabo, nakho, futhi umkhakha. Ububanzi frm iholo iyafana kakhulu ne-CFA iholo ububanzi. FRMs ngokuvamile uthole $50,000 ukuze $165,000.
Bobabili abizwa kuthiwa ngokulinganayo ihlonishwe emhlabeni wonke futhi akekho ungcono ezinye. Limane nje ezahlukene. Nakuba igama elithi CFA ubanzi e ububanzi futhi wagxila kakhulu ukutshalwa, i-frm ngokukhethekile wokuhlaziya ukulawula ubungozi inhlangano. Isinqumo sakho phakathi kwalezi zinto zombili kuncike ngokuphelele lapho izithakazelo zakho amanga nokuthi yini ziyakujabulela ukwenza okwengeziwe. Uma ufuna ukufunda kabanzi mayelana engcono CFA PrEP izifundo you can go here. Akukho isizathu esenza ukuthi ngeke kokubili. Konke kuncike kulokho ofuna ukukwenza nge-career yakho. I simo okunengqondo kakhulu kokuba kokubili CFA futhi frm isitifiketi is if you are a CFA and would like to specialize in risk management. Khumbula, ukuqokwa frm indlela ezikhethekile aminingi ukudlula CFA. Ngakho, kungaba nenzuzo ukuba kokubili. Ngingaluleka ukuthi Bheka ukuthi ufuna ukwenzani nge-career yakho bese ukhetha umuntu oyedwa. Khona-ke ngemva kokuthi uqale umsebenzi wakho, ungakwazi ukunquma ukuthi kungasiza ukuba aphishekele omunye.
Qhathanisa eziphezulu frm Izifundo
Qhathanisa The Best CFA Coursess
Kuhle Ibha sokuzilungiselela Izifundo
Umlingane Osebenzelana Naye Unathi